Tsy fandrosoan'ny sehatry ny fambolena: manaitra ny FAO - Book News Madagascar
Aretina sy loza
Anisan’ny firenena mivelona amin’ny resaka fambolena i Madagasikara. Maro amin’ireo vokatra Malagasy no ahondrana any amin’ireo firenena maro samihafa. Raha ny zava-misy anefa, tsy vitsy ireo vokatra tsy mahatosika akory ny filan’ny mponina ao aminy. Misy hatrany ny fanafarana avy any ivelany mba afahana mameno ny banga. Laharana voalohany amin’izany ny vary, izay lazaina fa foto-tsakafon’ny Malagasy. Anisan’ny antony tsy maha ampy an’ity vokatra iray ity ny fahasimban’ny voly eny ifotony. Antony mahatonga izay fahasimbana izay, ny tsy fiahian’ny mpamboly ny tasy sy ny aretina mety hahazo ny zava-maniry, toy ny nahazo ny voly mangahazo tao Afrika, tany Ouganda, tamin’ny 1989, araka ny nambaran’ny FAO tamina asa fikarohana antaon’izy ireo. Eo ihany koa ny fanovaovana ireo zezika fampiasa. Ny vokatra simika no mibahan-toerana ampiasain’ireo mpamboly ka manimba sy miteraka fahalanian’ny tany, izay mitarika any amin’ny tsy fitomboan’ny taranaky ny zava-maniry. Mbola azo atao tsara anefa ny manarina izany amin’ny fanarahana ny fomba netim-paharazana, izany hoe ny fampiasana ny akora natoraly mba hanatsarana ny vokatra miakatra. Farany, eo ihanihany koa ny loza ateraky ny fitrandrahana simika ataon’ireo manam-pahaizana, toy ny &erosion genetique& izay mahazo ny voly rehefa soloina ny &variete& misy ao aminy, araka ny fanazavan’ny FAO hatrany. Fa eo ihany koa ny olana ateraky ny fanimbana ny tontolo iainana toy ny doro tanaty sy ny fanapahana ny ala.
Les rizières s’étendent à perte de vue à madagascar.
Miteraka harena lehibe ho an’ny firenena iray ny fambolena, raha toa ka hay ny mikolokolo sy manao laharam-pamehana izany. Manana ny toerana lehibe amin’ny fiarovana ny fahasalamana rahateo ny zava-maniry. Marefo ity sehatra ity eto Madagasikara. Maro amin’ireo tantsaha no tsy mahay mikajy ny vokatra azony. Maro amin’ireo voly izay fantatra fa manana taranaka tsara araka izany no lany tamingana, ka miteraka faharatsian’ny vokatra azo. Rah any fantatra anefa, karazana zava-maniry 7000 no azo hotazana sy hambolena. Eto Madagasikara, azo atao tsar any mampitombo ny taranaka zava-maniry, fanararaotra lehibe eto amintsika rahateo ny fananana tany midadasika, izay mbola azo hajariana. Ho fampivoarana ny sehatry ny fambolena, indrindra fa ny toe-karena, misy ny tetik’ady nampetraky ny fanjakana mba afahana mahita fahombiazana amin’ny fampitomboana ny zava-maniry fa indrindra mba hampaharitra ny fambolena varim-bazaha eto amintsika. Omena lanja araka izany ny vokatra kely indrindra ary harahimaso ireo akora fampiasa amin’ny izany.
Mitana anjara toerana lehibe amin’ny fampandrosoana ny firenena ny tantsaha. Tsara araka izany raha toa ka tsy atao ambanin-javatra ny fikarakarana azy ireny. Ao anatin’izany ny fijerena akaiky ny olana ifotony mahazo azy. Eo ihany koa ny fanomezana fampiofanana sy masim-boly voafantina mba ho tosika amin’ny fampandrosoana ny firenena.